ဆင်းရဲပေမယ့် သူများ ပိုက်ဆံအလကား မလိုချင်တဲ့ ပန်းရောင်းတဲ့ ကောင်လေးရဲ့ချီးကျူး လေးစားစရာစိတ်ဓာတ် – SainPwar
SainPwar > ဗဟုသုတများ > ဆင်းရဲပေမယ့် သူများ ပိုက်ဆံအလကား မလိုချင်တဲ့ ပန်းရောင်းတဲ့ ကောင်လေးရဲ့ချီးကျူး လေးစားစရာစိတ်ဓာတ်
သားခြေရာတစ်တောင် မောင်မဲခေါင်နှင့် မိခင်ဖြစ်သူ ဖျာလိပ်နတ် မအောင်ဖြူတို့ရဲ့ ဘဝဇာတ်ကြောင်း
လူ ရယ်လို့ ဖြစ်လာရင် စားဝတ်နေရေး အတွက် ရုန်းကန်ကြရပါတယ် တချို့ကတော့ ဒါကို လက်ကြော မတင်းတာမို့ မလုပ်ချင်ကြဘဲ အချောင်စား အချောင်နေချင်ကြပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ တချို့ကတော့ အသက်သာငယ်ပေမဲ့ မိဘကို ကူညီပြီး စားဝတ်နေရေးအတွက် ကိုယ်တတ်နိုင်တဲ့ အလုပ်လေး နဲ့ ငွေရှာပေးနေတဲ့ ကလေးလေးတွေ အများကြီး ရှိပါတယ် ..
ဒီအကြောင်းလေးကိုတော့ လူမှုကွန်ရက်သုံးစွဲ သူတစ်ဦးက ဓာတ်ပုံလေးတွေနဲ့ အတူ အောက်က စာလေးကို ခုလို မျှဝေခဲ့ပါတယ် ။
နေ့ လယ်က ကုသိုလ်တော် ဘုရားမှာတွေ့ခဲ့တဲ့ချာတိတ် စတွေ့တွေ့ချင်း သူကကျနော်တို့ကိုပန်းလာရောင်းတယ်ဗျ ကျနော်တို့လဲပန်းမဝယ်ဘူးဆိုတော့ သနပ်ခါးလိမ်းပေးရမလားတဲ့မုန့်ဖိုးပေးချင်သလောက်ပေး ခဲ့ပါတဲ့(အသက်ငယ်ပေမယ့်သူတစ်ပါးပိုက်ဆံ ကိုအလကားမလိုချင်တဲ့စိတ်ကိုတော့လေးစားမိတယ်)
ကျနော်လဲ သူသနပ်ခါးလိမ်းတာသဘောကျတာနဲ့ တစ်ချက်ခုတ်၂ချက်ပြတ်ဆိုပြီးသူ့ကိုဓာတ်ပုံရိုက် မုန့်ဖိုးပေးပေါ့(သနပ်ခါးလိမ်းထား တာကတော့အလန်းကြီး)အဲ့လိုကျ ကိုယ်တော်ချောကသွားကျိူးးလေး နဲ့ရယ်ပြတယ် အသက်ကခုမ ှ၅ နှစ်ပဲရှိသေးတယ်တဲ့….
၂၀၀~၅၀၀လောက်နဲ့ဘာမှမထူးခြားဘူးဆိုပေမယ့်လည်း 200~500 တွေများလာရင်တော့ သူတို့အတွက် အများကြီးအထောက်အကူဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဆိုပြီး အသက် ၅ နှစ်သာ ရှိသေးပေမယ့် သူများပိုက်ဆံ အလကားမလိုချင်တဲ့ ကလေးလေးတစ်ယောက်ရဲ့ စိတ်ဓာတ်နဲ့ ကူညီခဲ့ပုံလေးကို ကို ဖော်ပြခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
သနပ်ခါးတွေ အပြည့်လိမ်းထားတဲ့ ကလေးလေးရဲ့ ချစ်စရာပုံလေးတွေကို ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်…
ပရိသတ်ကြီးတို့လည်း ကလေးလေးရဲ့ ပိုက်ဆံအလကားမလိုချင်တဲ့ စိတ်ဓာတ်နဲ့ အစ်ကိုကြီးရဲ့ ကူညီတတ်တဲ့ စိတ်ဓာတ်လေးကို လေးစားသောအားဖြင့် ဂုဏ်ပြုစကားလေးတွေ ပြောခဲ့ပါနော်။
ဒီလို စိတ်ဓာတ် ပိုင်ရှင်တွေ များများလိုတာကြောင့် အားလုံးသိအောင်လည်း Share ပေးနိုင် ပါတယ်နော် …
လူ ရယ္လို႔ ျဖစ္လာရင္ စားဝတ္ေနေရး အတြက္ ႐ုန္းကန္ၾကရပါတယ္ တခ်ိဳ႕ကေတာ့ ဒါကို လက္ေၾကာ မတင္းတာမို႔ မလုပ္ခ်င္ၾကဘဲ အေခ်ာင္စား အေခ်ာင္ေနခ်င္ၾကပါတယ္။
ဒါေပမဲ့ တခ်ိဳ႕ကေတာ့ အသက္သာငယ္ေပမဲ့ မိဘကို ကူညီၿပီး စားဝတ္ေနေရးအတြက္ ကိုယ္တတ္ႏိုင္တဲ့ အလုပ္ေလး နဲ႔ ေငြရွာေပးေနတဲ့ ကေလးေလးေတြ အမ်ားႀကီး ရွိပါတယ္ ..
ဒီအေၾကာင္းေလးကိုေတာ့ လူမႈကြန္ရက္သုံးစြဲ သူတစ္ဦးက ဓာတ္ပုံေလးေတြနဲ႔ အတူ ေအာက္က စာေလးကို ခုလို မွ်ေဝခဲ့ပါတယ္ ။
ေန႔ လယ္က ကုသိုလ္ေတာ္ ဘုရားမွာေတြ႕ခဲ့တဲ့ခ်ာတိတ္ စေတြ႕ေတြ႕ခ်င္း သူကက်ေနာ္တို႔ကိုပန္းလာေရာင္းတယ္ဗ် က်ေနာ္တို႔လဲပန္းမဝယ္ဘူးဆိုေတာ့ သနပ္ခါးလိမ္းေပးရမလားတဲ့မုန႔္ဖိုးေပးခ်င္သေလာက္ေပး ခဲ့ပါတဲ့(အသက္ငယ္ေပမယ့္သူတစ္ပါးပိုက္ဆံ ကိုအလကားမလိုခ်င္တဲ့စိတ္ကိုေတာ့ေလးစားမိတယ္)
က်ေနာ္လဲ သူသနပ္ခါးလိမ္းတာသေဘာက်တာနဲ႔ တစ္ခ်က္ခုတ္၂ခ်က္ျပတ္ဆိုၿပီးသူ႔ကိုဓာတ္ပုံ႐ိုက္ မုန႔္ဖိုးေပးေပါ့(သနပ္ခါးလိမ္းထား တာကေတာ့အလန္းႀကီး)အဲ့လိုက် ကိုယ္ေတာ္ေခ်ာကသြားက်ိဴးးေလး နဲ႔ရယ္ျပတယ္ အသက္ကခုမ ွ၅ ႏွစ္ပဲရွိေသးတယ္တဲ့….
၂၀၀~၅၀၀ေလာက္နဲ႔ဘာမွမထူးျခားဘူးဆိုေပမယ့္လည္း 200~500 ေတြမ်ားလာရင္ေတာ့ သူတို႔အတြက္ အမ်ားႀကီးအေထာက္အကူျဖစ္ပါလိမ့္မယ္ဆိုၿပီး အသက္ ၅ ႏွစ္သာ ရွိေသးေပမယ့္ သူမ်ားပိုက္ဆံ အလကားမလိုခ်င္တဲ့ ကေလးေလးတစ္ေယာက္ရဲ႕ စိတ္ဓာတ္နဲ႔ ကူညီခဲ့ပုံေလးကို ကို ေဖာ္ျပခဲ့တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
သနပ္ခါးေတြ အျပည့္လိမ္းထားတဲ့ ကေလးေလးရဲ႕ ခ်စ္စရာပုံေလးေတြကို ျပန္လည္မွ်ေဝေပးလိုက္ပါတယ္…
ပရိသတ္ႀကီးတို႔လည္း ကေလးေလးရဲ႕ ပိုက္ဆံအလကားမလိုခ်င္တဲ့ စိတ္ဓာတ္နဲ႔ အစ္ကိုႀကီးရဲ႕ ကူညီတတ္တဲ့ စိတ္ဓာတ္ေလးကို ေလးစားေသာအားျဖင့္ ဂုဏ္ျပဳစကားေလးေတြ ေျပာခဲ့ပါေနာ္။
ဒီလို စိတ္ဓာတ္ ပိုင္ရွင္ေတြ မ်ားမ်ားလိုတာေၾကာင့္ အားလုံးသိေအာင္လည္း Share ေပးႏိုင္ ပါတယ္ေနာ္ …
Previous Article စာတွေ ယူသုံးတဲ့ မေတ္တာရှင် (ရွှေပြည်သာ) ကို ဒဲ့ပြောလိုက်တဲ့ ဆရာကြီး ဦးတင်ညွန့်
Next Article ၈၈၈၈ အရေးတော် ပုံကြီး ဘယ်လိုဖြစ်ခဲ့ လဲ? ဘာတွေ ဖြစ် ခဲ့ လဲ? (လူ ငယ်တွေ သိထား သင့် ပါတယ်)